Yakakosha Bofu Rivet Fekitori - China Yakakosha Bofu Rivet Vagadziri, Vatengesi
Yakakwira mhando isina mvura fekitori Chisimbiso kumagumo mapofu ma rivets.
Iyo yakaderera-mutengo, yakasimba sarudzo iwe yaunogona kushandisa panzvimbo yemahara welds, screws, kana mabhaudhi, haigone ngura kana kukora, yakasimba kwazvo kupfuura aluminium rivets.
Yakazara Simbi Seal End Blind Rivet
Simbi Chisimbiso kumagumo bofu rivet ibofu rivet nyowani yekutsanya. Izvo hazvine chete zvakanakira kushandiswa kuri nyore, kugona kwakanyanya, ruzha rwakaderera, uye kunogona kudzikisira kusimba kwevashandi, nezvimwe.
Iine hunhu hwekuisa chisimbiso kwakanaka kwechikamu chinobatanidza uye riveting yepakati yeiyo bofu rivet isina ngura.
Yakazara Aluminium Seal End Bofu Rivet
Aluminium Seal yekupedzisira bofu rivet chivharo chakavharwa, segirazi rakapoteredzwa musimboti-kudhonza rivet pini yepakati musoro waive wakavharirwa mukati memusoro wechipikiri, dhonza rivet yapera, yakavharwa, iyo yepakati kudhonza rivets musoro weti yemuswe inodhonzwa mukati nekukwanira yekunze kumucheto kwegomba, gomba nekukodzera rakavharwa zvachose kuti urarame, musoro wenzara unogona kuvimbisa kuti hapana kubvaruka, hapana kuvuza.
Yakazara Stainless Simbi Seal End Blind Rivet
Iwo ma rivets akagadzirirwa zvakanyanya kuisirwa manyore. Vanogona kudhonzwa kuburikidza nemakomba epaneru kana pasi pezita. Izvo zvakagadzirwa neelastomer zvinhu uye zvine kuomarara kwakanaka. Vanogona kuiswa nekukurumidza kunyangwe mune yekupindira gungano.
Yese simbi isina tsvina mapofu akaomarara, ane yakasimba tensile simba uye yakakwirira sheari simba, uye haambofa ngura.
Aluminium Peel Kupera Bofu Rivet
Iyo mhando nyowani yeiyo riveted fastener iyo iri nyore kwazvo kune riveting. Iyo inogona kuratidza ayo akasarudzika zvakanakira munzvimbo ine diki nzvimbo kana mune zvakatipoteredza pasina rivet pfuti kana kushandisa rivet pfuti. Zvidimbu zviviri kana kupfuura zvakabatana zvinogona kumisikidzwa zvinobudirira nekukanda mandrel nechinhu chimwe chete senge sando.
Aluminium Multi-Grip Bofu Rivet
Multi-Grip rivets ine yakakura yekubata renji, saka rivet inogona kutsiva maviri kana matatu akajairwa rivets. Inogona kudzora kuverengera uye kufungidzira basa. Iyo inokodzera mashandisirwo uko akasiyana akasiyana masisitimu anowanzoda akati wandei maRivet saizi. Iyi yakakura yekubata renji inowedzera dhizaini kuchinjika uye inoderedza rivet hesera, iyo inogona kuchengetedza yakawanda mari. Ivo zvakare vanogarisa akakurisa maburi uye anopokana nekudengenyeka uye hunyoro.
Yakazara Simbi Multigrip Bofu Rivet
Yakazara Simbi Multigrip bofu rivets akanyatsogadzirirwa maapplication apo zvishandiso zveakasiyana hukobvu zvinowanzozoda rivet muhukuru hwakawanda.
Iyo inoratidzira yakatambanuka yekubata renji iyo inovapa iwo akasiyana-siyana kune akasiyana mafomu. Vanogona zvakare kudzora rivet hesera uye mutengo nekutora nzvimbo yemaviri kana anopfuura masize e "standard" rivet.
Yakazara Simbi Yakakwira-simba Bofu Rivet Inter-Lock
Inter-kukiya izere Simbi Yakakwira-simba mapofu ma rivets akasimba musimba dhizaini, yakawanda-inobata, zvemukati zvekukiya zvekusunga zvakagadzirirwa kupa yakanyanya shear uye tensile simba. Yemukati mehendi yekuvharira sisitimu inopa 100% mandrel chengetedzo, inodzivirira mamiriro ekunze uye yakasimba vibration inodzivirira majoini.
Yakazara Simbi Yakakwira-simba Bofu Rivet Monobolt
Monobolt yakakwira-simba mapofu ma rivets akakwirira-akasimba mapofu ma rivets ane ekuvharira matanda uye yakanaka gomba kuzadza kune rinorema basa kunyorera.Monobolt mapofu ma rivets akagadzirwa uye akagadzirirwa ekudaira kunyorera uko kuchengetedzeka uye mashandiro akakosha kune zvinodiwa nevatengi.
Tri-Peta Bofu Rivet
Tri-Fold bofu rivet mafomu matatu ekutsikisa maronda padivi rekuvhara musoro panguva yekugadzika. Iwo makuru akaumbwa maronda anogovera iyo yakadzvanywa yekunamatira simba zvakaenzana uye zvinyoro nyoro pane iyo yakamisikidzwa zvinhu. Zvakare, iyo hombe nzvimbo yemashure inopa chengetedzo yakanakisa kubva kune iyo rivet iri kudhonzwa kuburikidza yakanyorovera, porous kana brittle application zvikamu.
Yakagadziriswa Bofu Rivet Hemlock Yakagadziriswa Bofu Rivet
Yakakwira tensile uye shear simba.
Iwo majoini haanyatsovhara mvura.
Yakasimba uye yemhando yepamusoro mubatanidzwa, kusagadzikana vibration nekuda kwekukiya kwayo kwemukati mandrel.